Waa maxay Ogeysiinta Faallooyinka Iimaylka WordPress? | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Waa maxay Ogeysiinta Faallooyinka Iimaylka WordPress?
Waa maxay Ogeysiinta Faallooyinka Iimaylka WordPress?
Blogging waa muhiim sababo badan aawadood, laakiin waxay door gaar ah ka ciyaartaa u ogolaanshaha shaqsiyaadka iyo ganacsiyada si isku mid ah inay la xiriiraan oo ay si toos ah ula xiriiraan dhagaystayaasha. Iyo sida ay shabakadaha caanka ah ee warbaahinta bulshada u ogolaadaan, waxaa lama huraan ah in booqdayaasha degelkaaga ay helaan hab ay ku bixiyaan jawaab celin iyo is dhexgal midba midka kale ee bloggaaga. Tani waa sidaad u dhisto bulsho, bulsho firfircoonina waa mid ka mid ah hantida muhiimka ah ee dadka ku celisa inay mar kale ku soo noqdaan goobtaada.
Si kastaba ha ahaatee, faallooyinka balooggu lama mid aha baraha bulshada, halkaas oo ogaysiisyadu ay ka soo baxaan taleefankaaga ama shaashadda kumbuyuutarka marka wax cusub la sheego, jecel, ama faallooyin la dhejiyo. Waa inaad dib ugu noqotaa blog-ga oo aad gacanta ku hubisaa qaybta faallooyinka ee boostada aad ka faallootay si aad u aragto haddii qof uu kula hadlayo wadahadal. Taasi waa, ilaa ogaysiisyada faallooyinka aan la hawlgelin.
Waa maxay sababta Ogeysiinta Faallooyinka ay muhiim u yihiin
Allow sawir aan kuugu sawirno Bal qiyaas inaad booqatay shabakad, akhriday qoraal blog oo aad faallo ka tagtay. Ka dib waxaad iska socotaa maalintaada. Waa maxay fursadaha aad dib ugu noqon karto mareegahaas oo aad hubiso faallooyinka si aad u aragto haddii uu qof ku soo jawaabay? Midnaba caato ah, sax?
Tani waa sababta ogeysiisyada faallooyinka ay muhiim u yihiin. Waxay u beddelaan soo-booqdayaasha suurtagalka ah ee hal mar ah soo-booqdayaasha waxayna u oggolaadaan akhristayaasha inay si fudud ula socdaan wada-hadallada.
Hadda, dhinaca maamulka iyo qoraaga, waxaa jira faa'iidooyin badan sidoo kale. Tusaale ahaan, haddii aad maamusho goob qoraayaal badan leh oo adeegsata dhexdhexaadinta faallooyinka, qoraa kasta waa la ogeysiin karaa marka faallooyin cusub lagu sameeyo qoraalladooda. Tani waxay hubinaysaa inay akhrin karaan oo ay ka jawaabi karaan faallooyinka wakhtiga dhabta ah.
Xaalad kasta ha noqotee - ogeysiisyada faallooyinka waa muhiim, sidoo kale way fududahay in lagu daro. Hoos waxaad ka heli doontaa 5 hab oo fudud oo aad ku dari karto ogaysiisyada faallooyinka tooska ah bartaada WordPress.
1. Ogeysiinta Faallaynta Iimayl ee WordPress ee Default
WordPress waxa uu si toos ah ugu qalabaysan yahay hawl ku ogeysiinaysa marka booqde ka tago faallooyinkaaga. Si kooban ayaan halkan ku soo koobaynaa in kastoo.
Si aad u ogaato waxa ogeysiisyada iimaylka loo dejiyay inay yihiin kuwa ugu tala galay goobtaada, aad Settings > Dood gudaha Dashboard-ka. Waa inaad aragto dhowr ikhtiyaar oo ah marka iimaylka la diri doono, oo ay ku jiraan marka qof soo dhejiyo faallooyinka iyo marka faallooyinka loo qabto dhexdhexaadin.
Haddii alaabtan la hubiyo, ogeysiis iimayl ayaa loo diri doonaa qoraaga boostada ee faallooyinka lagu sameeyay.
Dejinta xigta waxay la xidhiidha maamulaha goobta. Kahor intaan faallo la daabicin, maamuluhu wuxuu dooran karaa in lagu ogeysiiyo marka faallooyinka la oggolaado. Waxa kale oo jirta ikhtiyaarka ah in si toos ah loogu ansixiyo kuwa booqdayaasha ee hore u lahaa faallooyinka la ansixiyay.
Haddii aad u baahan tahay xulashooyin ka badan waxa lagu bixiyo WordPress sida caadiga ah, waxaa jira dhowr plugins oo diyaar ah si ay uga caawiyaan laad ogeysiisyada iimaylka ilaa heerka xiga.
2. Jetpack Rukunka
Ma heli kartid wax ka fudud tan, iyo maadaama Jetpack ay u tahay furaha udub dhexaadka u ah horumariyayaal badan, way ka sii fiican tahay. Isdiiwaangelintu waxay u sahlaysaa booqdayaasha goobta inay ku biiraan balooggaaga iyo mawduucyada faallooyinka ee qoraallada gaarka ah iyagoo ku daraya sanduuqyada calaamadaynta ee xagga hoose ee goobta gelinta faallooyinka.
Markaad gujiso sanduuqa hubinta, booqdayaashaada ayaa lagu soo dayici doonaa mar kasta oo faallo cusub lagu sameeyo boostada, taasoo lagu dhiirigelinayo inay ku soo noqdaan goobtaada marar badan. Tani waa hab fiican oo lagu dhiso xiriir waqti dheer akhristayaasha cusub.
Isdiiwaangeli faallooyinka dib loo raray waxay awood u siinaysaa faallooyinkaaga inay isku qoraan ogeysiisyada iimaylka. Maamuleheeda isdiiwaangelinta oo si buuxda u sifaysan ayaa sidoo kale u ogolaada isticmaalayaasha inay ka baxaan noocyada fariimaha qaarkood, ama ay joojiyaan ogeysiisyada qoraalada gaarka ah.
Tilmaamaha kale ee ay bixiso plugin-kan waxaa ka mid ah awoodda aad si fudud ugu maareyso macaamiishaada, fariimaha si buuxda loo beddeli karo (ay ku jiraan awoodaha HTML), iyo ikhtiyaarka in aad iska diiwaan geliso isticmaaleyaasha hal gujin. Sida gunno dheeri ah, Isdiiwaangeli faallooyinka dib loo raray waxa ku jira meelaynta luqadda isticmaaleyaasha caalamiga ah.
4. Ogeysiisyo Wanaagsan oo loogu talagalay WordPress
Ogeysiisyada Wanaagsan ee loogu talagalay WordPress waxay awood kuu siinaysaa inaad habayso dhammaan ogeysiisyada iimaylka ee WordPress. Waxaad iimaylo u diri kartaa isticmaaleyaal badan hal mar, bartilmaameedsiga doorarka shakhsi ahaaneed iyo midka badanba, waxaadna u diri kartaa fariimaha isticmaalayaasha keligood ah. Markaad rakibto plugin, waxaad arki doontaa a Notifications menu ku daray dhinacaaga. Waxaad u isticmaali kartaa liiskan si aad u habayso isticmaalayaasha iyo doorarka aad jeceshahay inaad hesho ogeysiisyada la habeeyey.
Soosaarayaasha plugin sidoo kale waxay bixiyaan tiro badan oo dheeraad ah oo premium ah, kuwaas oo awood u siin kara ogeysiisyada SMTP halkii ay ka ahaan lahaayeen nidaamka emailka WordPress ee caadiga ah. Waxay sidoo kale kuu oggolaanayaan inaad dejiso xasuusin doorar isticmaale oo gaar ah. Tusaale ahaan, haddii isticmaaluhu aanu wax cusboonaysiin ku samayn bog ama ku dhejin wakhti go'an, waxaad si toos ah u soo diri kartaa fariin ku nuujinaysa si ay u sameeyaan.
Pluginkan wpDiscuz waxaa loogu talagalay in lagu qaado faallooyinka WordPress ee heerka xiga. Waa beddelka Disqus kaas oo awood kuu siinaya inaad dhammaan faallooyinkaaga ku hayso xogtaada. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inaad ku beddesho xalalka faallooyinka kale sida Livefyer, Jetpack, iyo Facebook.
Marka lagu daro bixinta sifooyin badan oo awood kuu siinaya inaad habayso ogeysiisyadaada, plugin-kani waxa uu la mideeyaa aaladaha ka hortagga spamka ee caanka ah sida Akismet iyo WPBrusier. Haddii aad ku shaqeyneyso goobta ganacsiga e-commerce adoo isticmaalaya WooCommerce, waxaad si sahlan u isticmaali kartaa nidaamkan faallooyinka adigoo ku rakibaya oo kicinaya WooDiscuz.
Ogeysiiska iimaylka ee faallooyinka ma aha kuwa dhib badan, laakiin taasi macnaheedu maaha inaysan muhiim ahayn. Awoodsiinta ogeysiisyada noocaan ah waxay xaqiijisaa faallooyinka la ansixiyay wax yar ka dib marka la sameeyo. Waxay ku dhiirigelisaa qorayaasha inay ka jawaabaan oo ay la falgalaan booqdayaasha. Waxa kale oo ay siisaa booqdayaasha goobta in ay mar kale ku soo noqdaan goobta, taas oo hubaal ah in ay u wanaagsan tahay dhisidda kuwa daacad ah.
Sida wax kasta oo la xidhiidha WordPress, waxaa jira qalab fara badan oo diyaar u ah shaqada. Miyaad isticmaashaa mid ka mid ah plugins-yada kor lagu sharraxay? Mise waxaad qaadataa hab ka duwan? Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno fikradaada, si ku habboon, faallooyinka.
Talooyin lagu hagaajinayo shaqada WordPress ee Mareegtaada
Ka Faa'iidayso Kaydinta Cajiibka Ah Inta lagu jiro Toddobaadka Shabakadda